China Phone Holders mveliso kunye nabenzi | SJJ
Sinikezela ngefowuni eyahlukeneyo kubandakanya umnini wefowuni, intaba yemoto, iselfowuni, ifowuni ebambe ifowuni, into ebambe ixesha elide, njl njl njl. Intlawulo yasimahla yokubumba kuyilo esele lukhona ....
Sinikezela ngefowuni eyahlukeneyo ibandakanya umnini wokukhala kwemfonomfono, intaba yefowuni, iselfowuni, umnini wefowuni, ifowuni eneengalo ezinde, njl. Njl.
Umngundo: Intlawulo yokubumba yasimahla kuyilo esele lukhona.
Isixhobo: Iplastiki, iMetro, i-Silicone, iPVC ethambileyo, i-ABS + abicah, njl.
Inkqubo yeLogo: Ushicilelo lwesilikhi, ukugcwaliswa kombala, ukuprinta kwidijithali, ukuprinta kweLaser, njl.
Inkonzo ye-OEM iyafumaneka, yamkelekile isiko.
Isiphatho semisesane esinemicu yemagnethi sinokuncamatheliswa ngokulula kwifowuni yakho, ephathekayo, esebenzayo kwaye inokuba yidigri eyi-360 ejikelezayo kuyo nayiphi na i-engile oyifunayo.
Ifowuni yemoto / umnini wevili lokuqhuba imoto inokukunceda ukulungisa i-smartphone yakho kwideshibhodi okanye kwifestile yemoto ukujonga ngokulula, ukhulule isandla sakho kwaye ugcine ifowuni izinzile ukuze isetyenziswe ngokulula.
Egqithileyo Umtsalane weFowuni
Okulandelayo: Amatyala efowuni